Qaraxyo iyo Dagaal Culus oo ka dhacay Magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQaraxyo iyo Dagaal Culus oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Gaari laga buuxiyay waxyaabaha Qarxa ayaa goor dhow ku qarxay Kontoroolka laga galo Madaxtooyadda Soomaaliya ee ku yaalla Isgoyska Ceelgaabta meel u dhow beerta Beerta Nabadda.
Qaraxa ayaa dhacay ka dib dagaal toos oo dhexmaray Ciidamadii halkaasi ku sugnaa iyo dabley hubeysan.
Dagaalka ayaa waxaa la isku adeegsaday hub culus, waxaana daqiiqo ka dib qarxay gaari halkaasi yaallay.
Waxaa sidoo kale jira Qarax kale oo ka dhacay Muqdisho.
Waxaa jira Dhimasho iyo Dhaawac.
Liverpool oo ugu dambeeyn la soo wareegtay Xherdan Shaqiri